१८ श्रावण २०७८, सोमबार १७:२९ PM
७ पुष २०७७, मंगलवार १०:४६ मा प्रकाशित
२०७७ पुस ७ मङ्गलबार, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अन्ततः फुट्ने निश्चित प्रायः भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव र संसद विघटनपछिको नाटकीय घटनाक्रमपछि अब नेकपा फुटको प्रक्रियामा औपचारिक रुपमै अगाडि बढेको हो ।
दुई पक्षले बेग्लाबेग्लै स्थान र समयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । यी दुई समानान्तर बैठकहरु नेकपा विभाजनका लागि औपचारिक प्रस्थानविन्दु हुने मानिएको छ । तर सिंगो देशलाई तरगिंत पार्ने राजनीतिक कदमलाई लिएर नेकपाकै दुई शीर्ष नेतामा अनौठो भूमिका देखिएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र गृहमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले पछिल्लो कदमलाई लिएर आफ्नो धुव्र स्पष्ट पारेका छैनन् ।
यी दुई नेताको मौनता आश्चर्यजनक छ, अहिलेसम्म खुलेर न ओली समूहलाई समर्थन गरेका छन् न प्रचण्ड समूहलाई नै । त्यसैले यी दुईले अब कुन बाटो लिने हुन् हेर्न बाँकी छ । त्यसो त अहिले यी दुई मौन भए पनि यसअघि बारम्बार यी दुई नेताबारे विभिन्न अड्कलबाजी गरिएको हुन्थ्यो ।
नेकपामा लामो समय यता विवाद भइरहँदा बादलले अप्रत्यक्ष रुपमा ओलीलाई साथ दिइरहेका थिए । र ओलीले चालेको कदमपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका सात मन्त्रीले राजीनामा दिए । तर, गृहमन्त्री बादलले राजीनामा दिएनन्, अनि उनी ओलीको गुट भेलामा पनि पुगेका छैनन् । यसले अन्योल बढाएको छ- बादल आखिर नेकपामा कुन समूहमा छन् ?
अर्कोतिर नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम यसअघि सुरुवाती चरणमा प्रचण्ड-नेपाल समूहमा देखिए पनि अन्तिम अवस्थामा आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले साथ दिएका थिए । प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई पछिल्लो समय समर्थन गरिरहेका गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको विरोध त गरेका छन् तर त्यसको विरुद्धमा भएका छलफलमा आफूलाई सहभागी गराएका छैनन् । यसले थप अन्योल थपेको छ- वामदेव गौतम कुन समूहमा छन् ?
दुवै बैठकमा नजाने
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । दुवै पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एकले अर्को पक्षलाई कारबाहीको तयारी गरेको बुझिएको छ ।
तर गौतम र थापा बादल भने दुवै बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेकपा कार्यालयमा दुई सचिवले छुट्टाछुट्टै बैठकका लागि दुवै नेतालाई एसएमएस पठाएका छन् । यति धेरै गम्भीर राजनीतिक परिघटनामा उनीहरु मूकदर्शक जस्तै छन् । जे होस्, अहिलेसम्म वामदेव र बादलले देखाएको मौनता अचम्मको छ !